बिबाह भएको पुरुषसँग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? [यस्ता छन ६ कारण – Krazy NepaL
January 26, 2021 419
१. सुरक्षित:: केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरुष खोज्नुका धेरै कारण छन् । खासमा पाको उमेरका पुरुषसँग उनीहरुलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ । पाको उमेरका पुरुषहरु आर्थिकरुपले पनि बलिया हुन्छन् भन्ने विश्वास हुन्छ । उनीहरुमा जीवनको अनुभव पनि धेरै हुन्छ । पाको उमेरका पुरुषसँग महिलाले सुरक्षित महसुस गर्छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Prevअभिनेत्री जयश्री कोठामा मृत अवस्थामा फेला
Nextआङ सिरिङ्ग हुने यस्तो किरा , तपाईंको अनुहारमा हिँड्छन् हजारौं किरा !